Frequently asked questions – Bokashi Myanmar
ကျနော်/ကျမ ဘိုကာရှီက ပုံးထဲမှာတင် မြေဆွေးဖြစ်သွားမှာလား?
မဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ ပုံးထဲတင်မြေဆွေးဖြစ်သွားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပထမအဆင့်မှာ food waste က အချဉ်ပဲ ပေါက်မှာပါ။ (မီးဖိုထဲမှာတင်ပေါ့) ပုံစံကလဲ ကိုယ်စထည့်တုန်းကနဲ့ သိပ်မထူးခြားနား ပုံစံလေးရှိနေမှာပါ။ နောက်ပိုင်း မြေနဲ့ ရောပေးပြီးမှ မြေဆွေးအဖြစ် စတင်ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
ဘာမှမထူးသလို ထင်ရပေမယ့် ကိုယ်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာ တကယ်ထူးတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဘိုကာရှီအနုဇီဝပိုးလေးတွေက food waste မှာ ပါဝင်တဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်ကို အပင်တွေစားသုံးဖို့ အသင့်သုံးအာဟာရအဖြစ် ပိုမိုသေးငယ်တဲ့ အမီနိုအက်ဆစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ နောက်ပိုင်း မြေနဲ့ရောပေးတဲ့အခါ အလုပ်လုပ်တာပိုမို မြန်ဆန်ရတဲ့အကြောင်းတရားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မမြင်ရပေမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ဝက်လောက်က လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာ မျိုးပါ။
တအိမ်နဲ့တအိမ်မတူညီနိုင်တာမို့ ပြောရခက်ပါတယ်။ မိသားစုဝင် ၂ ဦး ၃ဦးရှိတဲ့ သာမာန်မိသားစု တစုဟာ တပတ်မှာ အမှိုက် ၁၀ လီတာလောက် ယေဘုယျထွက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းဘိုကာရှီလုပ်ရာမှာ ဒီထက်ပိုများများ နည်းနည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ တပတ်အချဉ်ဖောက်ရတာကို ပုံးဖြည့်လို့ပြီးတဲ့ ပြည့်တဲ့နေ့မှ စတင်ရေတွက်မှာပို့ပါ။ ပုံးထဲ ပိုဆန့်စေချင်ရင် ဖိပြီး သိပ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံးထဲမှာ လေမရှိလေ ပိုကောင်းလေမို့ ဒီလို သိပ် ပေးခြင်းကို အမြဲတမ်း လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဘိုကာရှီပုံး အချဉ်ဖောက်ချိန် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထားလို့ရလဲ။
နှစ်ပတ်ဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်း လမ်းညွှန်ချက်ပါပဲ။ သို့သော် ပိုကြာကြာထားမိလို့လဲ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ပုံးဖြည့်ချိန်နဲ့တင် ရက်သတ္တပတ်အတော်များများ ကြာနေရင်တော့ တပတ်လောက် အချဉ်ဖောက်တာက လုံလောက်ပါတယ်။ ပုံးဖြည့်နေချိန်အတွင်းမှာပဲ ဘိုကာရှီလုပ်ငန်းစဉ်က သူ့ဘာသာ စနေနှင့်ပြီမို့ပါ။
အချဉ်ဖောက်ပြီး နောက်မှာတော့ လုပ်ငန်းစဉ်က တည်ငြိမ်နေပြီမို့ တနှစ်လောက်အထိတောင် ထားမယ်ဆို ထားလို့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချဉ်ဖောက်ပြီး တိုက်ရိုက်အသုံးပြုတာကတော့ အကောင်းဆုံး အထိရောက်ဆုံးပါပဲ။ အကယ်၍ ကြာကြာထားမယ်ဆိုရင် အစိုဓာတ်ကိုတော့ တချက်ဂရုစိုက်ပေးပါ။ အရမ်း အစိုဓာတ်များနေရင် အနံ့ထွက်လာနိုင်ကောင်း ထွက်လာနိုင်လို့ပါ။
မျှိုအမျှင်လေးတွေ တက်နေတယ်၊ အဆင်ပြေလား။
ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဖြူရောင်မှိုမျှဉ်လေးတွေက မိတ်ဆွေရဲ့ဘိုကာရှီဟာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘော လက္ခဏာပါ။ အန္တရာယ်လည်း မရှိပါဘူး။
လေလုံတယ်ဆိုရုံ အရမ်းအဖုံးမကျပ်တဲ့ ပုံးတွေမှာ ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် အစိမ်း၊ အနက်နဲ့ အပြာရောင်လိုမှိုမျိုး တွေ့ရင်တော့ ဂရုစိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဘိုကာရှီပုံးက အရမ်းအစိုဓာတ်များလွန်းပြီး ဘိုကာရှီလုပ်ငန်းစသ်က ဖြစ်သင့်သလို ဖြစ်မနေတဲ့သဘောပါ။ မှိုနည်းနည်းပဲဆို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး ကျန်တာ ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံးတစ်ပုံးလုံး မှိုတက်နေရင်တော့ တနေရာမှာ ပုံးထဲက ဘိုကာရှီကို တူးမြှုပ်၊ ပုံးပြောင်အောင်ဆေးပြီး အသစ်ပြန်စပါ။
တခါခါကျ ဘိုကာရှီ မြေဆွေးပေါ်မှာတောင် အဖြူရောင်မှိုမျှင်လေးတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လုံးဝပြဿနာ မရှိပါ။ ကိုယ့်မြေဆွေးဟာ ကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်စွာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သဘောပါ။
ပုံးထဲက အနံ့နံတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အမြဲတမ်းနီးပါး ဒီပြဿနာဟာ ဘိုကာရှီပုံးအတွင်းမှာ အစိုဓာတ်များနေလို့ ဖြစ်တာချည်းပါ။ အနံ့အသက်ဟာ အစိုဓာတ် (အရည်များနေတာ)က လာတာပါ။ အဖုံးရဲ့ အတွင်းဘက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အငွေ့ပျံနေပါသလား? ဒါဆိုရင် အုန်းဆံခွံ၊ စပါးခွံ၊ လွှစာမှုန့် (သို့) သတင်းစာစက္ကူဖြဲထည့်တာလိုမျိုး၊ အရည်စုပ် ပစ္စည်းတစ်ခုခု ထည့်ပေးပါ။ လိုအပ်ရပ် အသစ်ပြန်စပါ။ သို့သော် အနံ့အသက်ကြောင့် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်တောင် ဘိုကာရှီဖြစ်စဉ်ကိုတော့ မထိခိုက်ပါ။ ဘိုကာရှီဖွဲနုထပ်ထည့်ပေးလျှင်လဲ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
ပုံးထဲက ဘိုကာရှီတွေအရမ်းခြောက်နေလို့ ရလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ်။ ဘိုကာရှီအနုဇီဝပိုးလေးတွေက အစိုဓာတ်နည်းနည်းလေးပဲ ရနေပါလိမ့်မယ်။ မြေဆီလွှာ ကောင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုဓာတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ လုံးလုံးခြောက်သွေ့နေတာမျိုးကျလည်း ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
ဘိုကာရှီပုံးကို တနေ့ ဘယ်နှကြိမ်လောက် အဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ ရနိုင်ပါသလဲ။
တနေ့တကြိမ် နှစ်ကြိမ်ထက် မပိုတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပိုသေးတဲ့ ပုံးလေးတစ်ပုံးထားပြီး တနေ့စာ အမှိုက်ကို စုပြီးမှ ဘိုကာရှီပုံးထဲ ဖြည့်တာမျိုးက ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အိုင်ဒီယာပါ။ ဒါမှ မိသားစုဝင်တိုင်း ပါဝင်နိုင်ပြီး၊ တယောက်ယောက်က အဖုံးပြန်ပိတ်ဖို့မေ့နေတာ စတာမျိုးလည်း ရှောင်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘိုကာရှီပုံးထားဖို့ ဘယ်အပူချိန်လောက်က အကောင်းဆုံးလဲ?
အပူချိန်ဒီဂရီ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြား အခန်းတွင်း အပူချိန်လောက်က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘိုကာရှီပုံး အိမ်ထဲထားပါ။ ဥပမာ အဝတ်လျော်ခန်းတို့ မီးဖိုခန်းတို့ပေါ့။
ဒါက ခဏခဏ အပူချိန်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချဖို့အတွက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တနေကုန် အရိပ်ရတဲ့နေရာမှာ ထားပေးပါ။ နေရောင်ချည် တိုက်ရိုက်မထိအောင်လို့ပါ။
အခုလိုမျိုး အပူချိန်ပမာဏတစ်ခုကို ထိန်းထားပေးနိုင်ရင် ဘိုကာရှီအနုဇီဝလေးတွေ အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်ဆန်ပြီး အကောင်ရေလည်း ပိုမြန်မြန်ပွားနိုင်ပါတယ်
ဘိုကာရှီပုံးထဲ ဘာတွေ ထည့်လို့ရလဲ?
အကုန်ရပါတယ်။ ခုမှ စလုပ်တာဆိုတော့ ဘိုကာရှီနဲ့ ကျွမ်းဝင်လာတဲ့အထိ အသားငါးတွေ ရှောင်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံ ကြီးကြီးမားမားတွေကို နည်းနည်း ပိုင်းပြီး စဉ်းပြီး ထည့်ပေးပါ။ ဒိန်ခဲ အသားငါးနဲ့တခြား ပရိုတိန်းကြွယ်ဝတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါလာရင် ဘိုကာရှီဖွဲနု နည်းနည်း ပိုဖြူးပေးပါ။ အရိုး၊ ထောပတ်စေ့နဲ့ ကော်ဖီစေ့ ကြိတ်ဖတ်လိုမျိုးတွေကတော့ မြေသားဖြစ်ဖို့ အချိန်နည်းနည်း ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုသာ ဆုံးဖြတ်ပါ။
လိမ္မော်ခွံတွေ ဘိုကာရှီပုံးထဲ ထည့်လို့ရလား?
ဟုတ်ကဲ့ ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေချည်း အရမ်းများနေရင်တော့ တခြားဟာတွေနဲ့ မျှထည့်ပေးပေါ့။ လိမ္မော်တို့ သံပုရာတို့က အက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်ပါတယ်။ သို့သော် ဘိုကာရှီကိုယ်တိုင်ကလည်း အချဉ်ဓာတ် သဘောပါတာမို့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သြဂဲနစ် မဟုတ်တဲ့ လိမ္မော် သံပုရာလိုဟာတွေ ထည့်မထည့်တော့ ကွကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ တချို့ကထည့်တယ်၊ တချို့ကတော့ မထည့်ကြဘူး။ ဘိုကာရှီဖွဲနုထဲ ပါဝင်တဲ့ ဘတ္တီးရီးယားလေးတွေ အနုဇီဝပိုးလေးတွေ ဓာတုဓာတ်ကြွင်းတွေကို ကောင်းကောင်း ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မို့ နောက်ဆုံး မြေဆွေးကွာလတီက ကောင်းတာပါပဲဲ။
ဘိုကာရှီတူးထည့်ထားတဲ့ မြေသားက အက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်မားလာမှာလား?
မဖြစ်ပါဘူး။ အစပိုင်းတပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာပဲ အက်ဆစ်ဓာတ်နည်းနည်း မြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘိုကာရှီတူးပြီး ထည့်ခါစ မြေမှာတော့ အပင် ချက်ချင်းမစိုက်သင့်ပါဘူး။ တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် မြေသားအတိုင်း pH ပမာဏတူတူ ဖြစ်ပွားပါလိမ့်မယ်။ (ယေဘုယျ pH 6. 5-7)pH ပမာဏ ယေဘုယျ ၆ ဝန်းကျင်၊ သို့ pH5နဲ့7ကြားပါ။
ဘိုကာရှီဖွဲနု ပမာဏ ဘယ်လောက်သုံးသင့်သလဲ။
Waste တလီတာလောက်ကို ဘရန်း စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ သို့ လက်တဆုပ်ဖွဖွေလောက်ပါ။ food waste တလီတာဆိုတာ များသောအားဖြင့် တကီလိုဝန်းကျင်ပါပဲ။ ဒိန်ခဲ၊ အသား၊ ငါးနဲ့ ကြက်ဥလို ပရိုတိန်းကြွယ်ဝတဲ့ waste တွေမှာကျ bran ခပ်များများလေး သုံးပေးပါ။ ပုံမှန်ပမာဏသုံးလည်း ရတာပါပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဘိုကာရှီအကျိုးပြုပိုးလေးတွေက အဆအများကြီး ပွားလာမှာပါ။
တနှစ် bran ပမာဏ ဘယ်လောက်လိုလောက်လဲ?
၂ ကီလိုကနေ ၄ ကီလိုလောက်ဆို ရနိုင်ပါတယ်။ bran တကီလိုကို ပုံမှန်ဆို food waste လီတာ ၁၀၀ လောက် အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
EM microbes are needed for your food waste to become bokashi. You can make your own bran using EM-1 and molasses, which is the “mother culture” used for making bokashi bran. There isarecipe in English on the US-based Teraganix website. You can also activate EM to make EM-A and use it asaspray instead of bran. Another alternative is to take the leachate fromabokashi bucket with tap and use that instead of bran. If you do this, though, start each bucket with “real” bokashi bran in order to retainagood balance of bokashi microbes in the process; otherwise there isarisk you will end up withaless than optimal combination of microbes
Bokashi bran အဆက်မပြတ် ထပ်ထပ် ဝယ်နေရမှာလား?
Food waste ကို ဘိုကာရှီလုပ်ဖို့ EM အကျိုးပြုပိုးလေးတွေက အဓိကလိုအပ်ချက်ပါ။ ဘိုကာရှီလုပ်ရာမှာ ပင်မ အဓိကဖြစ်တဲ့ EM1 နဲ့ တင်လဲရည်သုံးပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ Bokashi Bran ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို US-based Teraganix Website မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ EM1 ကို အီးအမ်အပြင် CEM လုပ်ပြီးလဲ Bokashi Bran အစား အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တခြားနည်းတစ်ခုကတော့ ဘိုကာရှီပုံးမှာ ရေပိုက်ခေါင်းတပ်၊ အရေစစ်ထုတ်ပြီး bokashi bran အစား ပြန်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်မယ်ဆို အစမှာတော့ တကယ့် bokashi bran အကောင်းကို သုံးပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ ဖြစ်စဉ်မှာ ဘိုကာရှီအကျိုးပြုပိုးလေးတွေ မျှခြေရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ နို့မို့ဆို အမြင့်ဆုံး ရသင့်တဲ့ အကျိုးပြုပိုးလေးတွေ အရေအတွက်အပြည့်အဝမရဘဲ နည်းနည်းလေးနဲ့ ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။
ရေပိုက်ခေါင်းတပ်သုံးမယ်ဆို ဘယ်လောက်ကြာရင် အရည်စစ်ထုတ်သုံးလို့ရပြီလဲ?
အချိန်တော့ နည်းနည်းယူရပါမယ်။ တခါခါကျ ဒုတိယ သို့ တတိယပတ်လောက်ကျမှ အရည်ရတတ်ပါတယ်။ ပုံးထဲထည့်တဲ့ ပစ္စည်းအပေါ်လည်း နည်းနည်းမူတည်တာပေါ့။ သစ်သီးဝလံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတော့ အရည်ပိုထွက်တာပေါ့။ ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပေါင်မုန့်လိုမျိုုး အရည်စုပ်အား ကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေ ပုံးထဲများနေရင်တော့ ဘိုကာရှီ အရေအရနည်းပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့် ဘိုကာရှီပုံးက သိပ်ခြောက်သွေ့လွန်းနေရင် ရေနည်းနည်းပါးပါးလည်း ထပ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘိုကာရှီ အာဟာရ ရလာနိုင်အောင်ပါ။
ရေပိုက်ခေါင်းတပ် ဘိုကာရှီပုံးက တပတ်ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် အရည် စစ်ထုတ်သင့်ပါသလဲ?
တပတ်ကို နှစ်ကြိမ်လောက်ပါ။ တခါတလေကျ သုံးလေးကြိမ်ပေါ့။ ပုံးထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းအပေးလည်း မူတည်သေးတာပေါ့နော်။
ဘိုကာရှီ အာဟာရရည်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာထားသုံးလို့ ရလဲ?
ခွက်တစ်လုံးနဲ့ခံယူပါ။ ကြာကြာမထားပါနဲ့ ရေနဲ့ရောပြီးရင် နေ့ချင်းပြီးအသုံးပြုပေးပါ။ လေဝင်လေထွက် လျှော့ချနိုင်အောင် အဖုံးပါတဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးတစ်ခုမှာ ထည့်ထားပါ။ အခန်းအပူချိန်မှာ သို့ အပူအအေးမျှတတဲ့ နေရာမှာထားရင် ရက်အတော်ကြာကြာ ထားနိုင်ပါတယ်။ freezer မှာ ထည့်လဲ ရပါတယ်။
ဘိုကာရှီ အာဟာရရေကို ရေနဲ့ဘယ်လောက်ပမာဏ စစ်ရမလဲ။
ဘိုကာရီအာဟာရရည်က တိုက်ရိုက်သုံးမယ်ဆို ပြင်းထန်ပြီး အချဉ်ဓာတ်လည်း မြင့်မားလွန်းတာမို့ ပန်းအိုးနဲ့ ပန်းခြံအတွက်ဆို အနည်းဆုံးရေ အဆ ၁၀၀ နဲ့ ရောစပ်အသုံးပြုပေးပါ။ ၁ ဆ ကို အဆ ၁၀၀၁ အထိပါ။ အားနည်းတဲ့ အပင်တွေနဲ့ ပျိုးပင်ပေါက်ကလေးတွေအတွက်ဆို အားပျော့အောင်လုပ်ပြီးမှ သုံးပါ။ ဥပမာ ၁ ဆ ကို အဆ ၁၀၀၀ အထိပါ။ သုံးလေးကြိမ်လောက် စမ်းသုံးပြီးရင် ဘယ်အပင်အတွက် ဘယ်လောက် စပ်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ ပိုပြီး နီးနီးစပ်စပ် သိလာမှာပါ။
ဘိုကာရှီဖွဲနုကို တခြားအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိသေးလား?
အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ ဘိုကာရှီအရည် မသုံးချင်ရင် အကျိုးပြုဇီဝပိုးအရေအတွက် မြင့်တင်ဖို့ မြေဆွေးထဲမှာ နည်းနည်းပါးပါး ရောပေးလို့ရပါသေးတယ်။ စိုက်ခါစ မျိုးစေ့တွေမှာလည်း ဘိုကာရှီဖွဲနု နည်းနည်းပါးပါး ဖြူးပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဖုန်စုပ်စက်သုံးတဲ့အခါ အနံ့အသက်လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဖုန်စုပ်စက်ထဲ ဘိုကာရှီဖွဲနု တစ်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းလောက် ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနံ့အသက်ဆိုးတွေ လျှော့ချဖို့ ရှူးဖိနပ်တို့ ဘွတ်ဖိနပ်တို့မှာတောင် နည်းနည်းပါးပါး ထည့်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘိုကာရှီပုံးကို မြေမှာ ဘယ်လောက်နက်နက် တူးထည့်ရမလဲ။
အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာလောက်ပေါ့။ တကယ်လို့ ခွေးတို့၊ ကျီးတို့၊ ငှက်တို့နဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေ နှောက််ယှက်နို်င်ခြေ ရှိရင်တော့ နည်းနည်းပိုနက်နက်လေး တူးထည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကို တာလပတ်တို့၊ သံဇကာကွက်တို့ ပျဉ်ပြား၊ သစ်ပြားတို့လို မျိုး ရနိုင်တာ တစ်ခုခုနဲ့ ဘိုကာရှီတူးထည့်ထားတဲ့နေရာကို ကာထားပေးနိုင်ပါတယ်။ စိုက်မယ့် အပင်အမျိုးအစားနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်နော်။ ဘယ်အနက်လောက်မှာဆို ကိုယ့်အပင်ရဲ့ အမြစ်လေးတွေ အာဟာရ ရနိုင်မလဲ စတာမျိုး။
ကြွက်တွေ ဘာတွေ လာမှာလာ။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ကြွက်လိုအကောင်တွေက ဘိုကာရှီကို အချဉ်ဓာတ် အက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်လို့ မကြိုက်ကြပါဘူး။ သူတို့က အပုပ်ကိုပဲ နှစ်သက်ကြတာမျိုးပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း အရမ်းဆာလောင် နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဘာနေနေကိုက်ကြမျာပဲ၊ ဘိုကာရှီတောင် အကိုက်ခံရမှာပဲ။ အကောင်ဗလောင်မှာ စိတ်ပူရင်တော့ ၄၀-၅၀ စင်တီမီတာလောက်အထိ ဘိုကာရှီကို တူးထည့်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ခပ်စိပ်စိပ် ဇကာကွက်လိုဟာမျိုးနဲ့ အုပ်ထားပေးပေါ့။ နောက်တခုလုပ်နိုင်တာက အောက်ပိုင်းပွင့်နေတဲ့ ပုံးအရှည်တမျိုးကို မြေမှာချ၊ ဘိုကာရှီကို သွန်ထည့်၊ မြေသားပြန်ဖုံးပေးပြီး အာဟာရ မြေကြီးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရောသွားပါစေပေါ့။ ပုံးတခါပြည့်တိုင်း တစ်ခါအထဲ ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘိုကာရှီတပုံးကို မြေကြီးထဲ တူးထည့်ပြီးပြီး။ ဘယ်တော့လောက် အပင်စစိုက်လို့ ရပြီလဲ။
ပုံမှန်ဆို ၂ ပတ်စောင့်သင့်ပါတယ်။ စောင့်ရတဲ့ အကြောင်းကလဲ ဘိုကာရီက အက်ဆစ်အချဉ်ဓာတ်မြင့်လို့ အပင်လေးတွေ ချက်ချင်းစိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးလို့ပါ။ ၂ ပတ်လောက်ဆို pH လယ်ဗယ်ကလဲ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီ။ ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တာ စိုက်နိုင်ပါပြီ။ ကိုယ်က အမြစ်ထွက်ဖို့ကြာအုံးမယ့် မျိုးစေ့က စိုက်တာမျိုး၊ အပင်ပေါက်သေးသေးနဲ့ စိုက်တာမျိုးဆို ဘိုကာရှီ သွန်တဲ့နေ့မှာတင် ချက်ချင်းတောင် စိုက်လို့ရပါသေးတယ်။
ရာသီဥတု တကယ်အေးတဲ့ ဆောင်းရာသီလိုမျိုးကျ ဘာလုပ်သင့်လဲ။
နေထိုင်ရာဒေသ၊ စိုက်ပျိုးတဲ့ အပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေကတော့ မျိုးစုံပါပဲ။ မြေကြီးအပေါ်ယံလွှာပါရေခဲသွားတဲ့ အာတိတ်ဒေသ ဆောင်းရာသီမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ဆောင်းရာသီမှာ ရပ်ထားပြီး နွေဦးလာမှ ပြန်စရမှာပေါ့။ (အဲဒီကျလည်း နွေဦးရောက်လို့ စိုက်ပျိုးတော့မယ်ဆို ဘယ်အာဟာရမှ မြေသားမှာ ရှိနေမှာမဟုတ်) ဘိုကာရှီ အချဉ်ဖောက်တာ လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် ကိုယ်အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်အထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအပူချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ခဲသွားရင်တောင် ပြဿနာမရှိပါ။ ဆောင်းရာသီအတွက် အိမ်ထဲတင် မြေဆွေးပုံးတစ်ပုံးလောက် လုပ်ထားရင်လဲ ကောင်းပါတယ်။ နွေဦးကျ အပင်တွေပြန်ပြင်စိုက်ဖို့ မြေဆွေး အသင့်ရှိနေတော့ ကောင်းတာပေါ့။
စိုက်ဘောင်မှာ ဘိုကာရှီပမာဏ ဘယ်လောက်သုံးသင့်လဲ။ ပန်းအိုးနဲ့ဆိုရင်ရော?
ပန်းအိုးတွေ စဉ့်အိုးတွေလိုမျိုးနဲ့ စိုက်မယ်ဆို အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဘိုကာရှီ ၃၀ လောက်နဲ့ မြေကြီး ၇၀ လောက် ရောပေးတာပါ။ စျေးက မြေဆွေးဝယ်သုံးရင်တာဆိုရင် အရမ်းစူပါ အကောင်းစား မြေဆွေးတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်အမျိုးအစားမှာ အာဟာရဓာတ် တကယ်ပါမပါတော့ တချက်စစ်ကြည့်ပါ။ ပန်းအိုးထဲ မထည့်ခင် မြေကြီးနဲ့ ဘိုကာရှီကို လက်တွန်းလှည်းတို့ ဘိလပ်မြေ ဒယ်အိုးတို့မှာ အရင်ရောလဲရပါသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ပန်းအိုးမှာ မြေသားတစ်ထပ် ဘိုကာရှီတစ်ထပ်နဲ့ နောက်ထပ်မြေသားတစ်ထပ်၊ ဒီလိုတထပ်ချင်းထည့်လဲ ရပါတယ်။ ဘိုကာရှီလည်း ပေါ်မနေအောင် အမြင်လည်းလှအောင် အပေါ်ဆုံးမှာ မြေသားကောင်းကောင်းလေးတစ်လွှာ အုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိုက်ခင်းဘောင်အတွက်ကတော့ အာဟာရစားသုံးမှုမြင့်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွက်က တူတူပါပဲ။ ညွှန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မီတာ ပတ်လည်လောက်မှာ ဘိုကာရီ လီတာ ၃၀-၄၀ ပါ။ ဒါဟာလည်း ဘယ်လို အခံမြေအမျိုးအစားလဲ ဆိုတာနဲ့ နဂိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးဖူးတာနဲ့ ပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ အများကြီးဆိုပါလိမ့်မယ်။
ဘိုကာရှီပုံးမှာဖြစ်စေ၊ စိုက်ခင်းထဲမှာ ဖြစ်စေ သတင်းစာ စက္ကူတွေထည့်သုံးရင် မင်တွေက စိတ်ချရရဲ့လား။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အလားအလာကို တချက်ကြည့်ပါ။
ဥရောပနိုင်ငံ အသီးသီးမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ဒီနေ့ခေတ် မင်တွေဟာ အန္တရာယ် မရှိတော့ပါဘူး။ အရောင်ပါတဲ့ ကာလာပရင့်တင်း မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ လက်ကမ်းစာစောင်စတာတွေနဲ့ တရုတ်ကလာတဲ့ ထုပ်ပိုးရာမှာသုံးတဲ့ ကာလာ စက္ကူတွေကတော့ တမျိုးပေါ့နော်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ မသုံးခင် သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်မိပါတယ်။
မြေကြီးနဲ့ရောပြီးသွားရင် ဘိုကာရှီက မြေသားဖြစ်သွားဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရလဲ။
ဒါကတော့ အခံမြေမှာရှိတဲ့ အပူချိန်ပြီးတော့ ရှိနှင့်ပြီးသား အနုဇီဝပိုးလေးတွေရဲ့ အက်တစ်ဖြစ်မှု စတာတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ပိုအေးတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ နွေဦးနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ဘိုကာရှီက မြေသားဖြစ်သွားဖို့ ၆ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီလိုမျိုးမှာ ဆိုရင်တော့ နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုပိုပူနွေးလေ ပိုမြန်လေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အပင်စိုက်ဖို့ရာ ဘိုကာရှီက မြေဆွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားအောင်အထိ စောင့်ဖို့မလိုပါဘူး။ နှစ်ပတ်လောက် စောင့်ပြီးရင် ဘိုကာရီကို မြင်နေရအုံးတောင် အပင်စစိုက်ဖို့ အိုကေနေပါပြီ။ အခံမြေမှာ အကျိုးပြုပိုးမွှားလေးတွေ ပိုများလေ လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမြန်ဆန်လေပါပဲ။ အရမ်းညံ့တဲ့မြေနဲ့ သဲမြေတွေမှာတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးပြုအနုဇီဝပိုးတွေ မခိုင်မာသေးခင် အချိန်မှာ အချိန်နည်းနည်းပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ရနိုင်ရင်တော့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေနဲ့ ကွာလတီကောင်းတဲ့ မြေသားတို့ကို ရောထည့်ပေးပါ။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အကျိုးပြုပိုးလေးတွေ အများအပြား ပါဝင်တတ်ပါတယ်။
အရိုးတွေမြေနဲ့ ရောသွားဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲ?
ဘိုကာရှီနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကြက်ရိုး ဝက်ရိုး စတာတွေဟာ ဘိုကာရှီ မသုံးထားတာတွေထက် ကြေပျောက်ဖို့ ပိုမြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေနေ အရိုးဟာ အချိန်တော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး သုံးလေးလက နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မြေသားထဲ ဘိုကာရှီ အရိုးလေးတွေတွေ့ရရင် တူလေးဘာလေးနဲ့ ထုပြီး ချေပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်က အရမ်းအဖိုးတန်ပါတယ်။ ဘိုကာရှီလုပ်ထားတဲ့ အရိုးလေးတွေဟာ ကျွပ်ဆတ်နေတော့ ကွဲလွယ်နေပါပြီ။ ဒါမှ မဟုတ်လဲ မြေကြီးထဲ ပြန်သာမြှုပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဘိုကာရှီပုံးကို မြေနဲ့ ရောနည်းလေး ပြောပြပါ?
စိုက်မယ့်အပင်အမျိုးအစား အရင်စဉ်းစားပါ။ အမြစ်ရှည်တဲ့ အပင်တွေက အမြစ်တိုတဲ့ အပင်တွေထက် ဘိုကာရှီကို ပိုနက်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ပါတယ်။ ပဲရှည်သီးပင်တွေ တူးစိုက်မလား? မြောင်းလိုမျိုး ကျင်းတူးပြီး ဘိုကာရှီဖြန့်ထည့်၊ ပြီးရင် မြေသားနဲ့ ပြန်ဖုံးအုပ်ပေး၊ အပင်အကြီး အမျိုးအစားတွေ စိုက်မလား? ကျင်းတကျင်း တူးပြီး၊ ဘိုကာရှီဖြည့်၊ ကျင်းအရွယ်အစား သင့်တော်သလိုပေါ့။ ဘယ်တော့မဆို မစိုက်ပျိုးခင် ၂ ပတ်တော့ စောင့်လိုက်ပါ။ ပန်းတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစိုက်ဖို့ ဘောင်လုပ်မလား?
မြေမှာ ဘိုကာရှီ လိုသလိုဖြန့်၊ သင့်တော်အောင် မြေပြန်ဖုံး၊ အစ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကို ငှက်တွေ တခြား အကောင်ဗလောင်တွေ မလာစေချင်ရင် အစိမ်းစလိုဟာမျိုး တစ်ခုခု အုပ်ထားပေးနိုင်ရင် ပိုတောင် စိတ်ချရသေး။ ဘိုကာရှီကာတော့ အမြဲတမ်းဖုံးအုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ သေချာ ဖုံးအုပ်မထားလို့ ပေါ်နေရင် အချဉ်ဖောက်ထားတာ ပျောက်ဆုံးပြီး ပုပ်သွားတတ်တယ်။
မသုံးဖြစ်ရင်တော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ၂ နှစ်ဝန်းကျင်အထိ ကြာကြာခံတတ်ပါတယ်။ ဘိုကာရှီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးတာတစ်ခုက Mineralization ခေါ် အာဟာရကို မြေဆီထဲ စနစ်တကျ ချေဖျက်သိုလှောင်ပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကြောင့် အာဟာရတွေဟာ မြေကြီးမှာ ထာဝရနီးပါး ပြန်လည်ရရှိသွားတာမျိုးပါ။
ပြီးတော့ မြေဆီမှာ သြဂဲနစ်မတ္တာတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ အရေအတွက်တိုးပွားနေအုံးမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မြေဆီလွှာ အရည်အသွေးကလည်း ပိုလို့ပိုလို့ ရှင်သန်ပွားများလာပါမယ်။
ကြိုက်တာပေါ့။ ကြိုက်သမှ သိပ်ကြိုက်။ အချဉ်ဓာတ် အက်ဆစ်ဓာတ်ကြောင့် အစ တစ်ပတ်နှစ်ပတ် လောက်တော့ သူတို့ ဘိုကာရှီကို ရှောင်နေကောင်း ရှောင်နေလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ အငမ်းမရ တိုးဝင်ပြီး ပွားတော့တာမျိုးဗျ။
ခုလိုမျိုး အနုဇီဝပိုးလေးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ အန္တရာယ်ကော ကင်းရဲ့လားဗျ?
လုံးဝကို အိုကေပါတယ်။ ဘိုကာရှီဖွဲနုမှာ အနုဇီဝ အမျိုးအစား ငါးစုရှိတယ်။ EM မှာ ပါတာနဲ့ တူတူပဲ။ ဒါတွေကို သာမန် ဥရောပ (ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့) အနုဇီဝတွေလို့ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အီးအမ်မှာ တန်ဖိုးရှိတာ တစ်ခုက ခုလို ထူးခြားတဲ့ မဟာမိတ် အနုဇီဝလေးတွေက မြေဆီလွှာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေးဖို့ ထူးထူးခြားခြား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ရာလဲ လုုံးဝလုံးဝကို ဘေးကင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဘေးကင်းတယ်ဆိုတာထက် သူတို့နဲ့ ထိတွေ့နေရတာ ကျန်းမာရေးအတွက်တောင် ပိုကောင်းပါသေးတယ်။ ဒီအနုဇီဝ အကျိုးပြု ပိုးမွှားလေးတွေက ဂေဟဗေဒစနစ်ကိုလည်း မဖျက်ဆီး မပျက်စီး စေပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ သဘာဝက အမြဲတမ်း အရာရာတိုင်းမှာ မျှခြေတစ်ခု ရှိနေအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
အိမ်သုံး မြေဆွေးပုံး မြေဆွေးကန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အပင်စိုက်ဖို့ ဘိုကာရှီကို တိုက်ရိုက်တူးမမြှုပ်ဘဲ အိမ်ထဲမှာဖြစ်စေ၊ အိမ်ပြင်မှာဖြစ် မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းမြေဆွေးပုံးဆိုတာမျိုးက ကိုယ်က ရေခဲအောင် အေးတဲ့ဆောင်းရာသီနဲ့ မြောက်ဖျားဝင်ရိုးစွန်းနိုင်ငံတွေမှာ နေတဲ့အခါမျိုးမှာမှ လိုအပ်မှာပါ။ နွေဦးလာတာနဲ့ အိုးထဲက အပင်လေးတွေ အစကပြန်စိုက်ဖို့ မြေဆွေးရှိနေအောင်လို့လေ။
ပလပ်စတစ်ပုံး သို့ ကန်တစ်ခုရှာပါ။ အဖုံးပါလဲရ၊ မပါလဲ ရပါတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ တနေရာမှာ ပုံးကို အထိုင်ချပါ။ ဘိုကာရှီနဲ့ မြေသားနဲ့ တစ်ဝက်စီရောပါ။ ဘိုကာရှီကို မြေနဲ့ကောင်းကောင်း ထိတွေ့မှုရှိအောင် ရောနှောပေးပါ။ ပန်းအိုးအဟောင်းထဲက မြေတွေကို ပြန်သုံးလို့ ကောင်းပါတယ်။ မြေသားနဲ့ အဖုံးအုပ်တဲ့သဘောမျိုး မြေသားထု ၅-၁၀ စင်တီမီတာလောက်ထုနဲ့ ပြန်ဖုံးပါ။ မြေဆွေးပုံးထဲက မြေက အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖုံးကြပ်အောင် ပြန်ပိတ်တာမျိုး မလိုအပ်ပါဘူး။ အစိုဓာတ် လှည့်ပတ်အားပေးဖို့ အပေါ်ကနေ သတင်းစာအဟောင်းတို့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါအဟောင်းတို့နဲ့ အုပ်ထား ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဖုံးပါတဲ့ပုံးမျိုးဆို အဖုံးကို အပြည့်မဖုံးဘဲ တဝက်တပြတ် လှပ်ထားပေးပါ။ ဘိုကာရှီနဲ့ မြေသား အရောက အရမ်းလည်း အစိုဓာတ်မများသင့်သလို အရမ်းကြီး ခြောက်သွေ့ မနေသင့်ပါ။ မြေသားကောင်းတစ်ခုမှာ ရှိတတ်တဲ့ သာမာန် အစိုဓာတ်မျိုးဆို သင့်လျော်ပါပြီ။ မြေဆွေးပုံး မြေဆွေးကန် အနံ့ထွက်ရင် အစိုဓာတ်များလွန်းလို့ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမို စောင့်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မွှေပေးတဲ့အခါ အောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်မှု အားကောင်းပြီး ဒါက အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အပူထွက်တယ်ဆိုတာ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ အနာဂတ်အပင်လေးတွေအတွက် ဒီစွမ်းအင်ကို ဒီမြေသားထဲမှာပဲ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်က ၂ ပတ်ကနေ ၆ ပတ်ဝန်းကျင် ကြာတတ်ပါတယ်။ အပူချိ်န်နဲ့ food waste အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီးတော့ပေါ့။
အိမ်ပြင်ပ လုပ်ဆောင်နည်း Outdoors
အခြေခံအားဖြင့် အပေါ်ကဟာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ လုပ်ဆောင်တာပေါ့။ မိုးတော့ လုံအောင် ထားပေးရပါမယ်။ ဘောင်လုပ်ပြီးတော့ ဖြစ်စေ၊ ခြံထောင့်နားက ပေါင်းပင် မြက်ပင် မထူထပ်လှတဲ့ စိုက်ဘောင်ကို ဖြစ်စေ အပင်မစိုက်ဘဲ မြေဆွေးလုပ်ဖို့ သုံးနိုင်တာပဲ။ တနေရာထဲမှာပဲ ကိုယ့် ဘိုကာရှီပုံးကို တူးထည့်ထားလိုက်လေ။ မြေဆွေးဆပ်ပလိုင်းလဲ မပြတ်တမ်းရသွားတာပေါ့။ ပရောဂျက်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ အသင့်သုံးစရာ မြေဆွေးလိုတဲ့အခါကျလဲ ပုံးတစ်ပုံးနဲ့ ဖြည့်ယူလိုက်ရုံ သို့မဟုတ် တွန်းလှည်းလေးနဲ့ပေါ့။